अमेरिकाले राखेको डाटा लिक हुँदा लाखौं अफगानी खतरामा, तालिबानले खोजी गर्दै ? — Imandarmedia.com
अमेरिकाले राखेको डाटा लिक हुँदा लाखौं अफगानी खतरामा, तालिबानले खोजी गर्दै ?
एजेन्सी। २० वर्षपछि अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्दै गर्दा लाखौं अफगानी नागरिकहरु खतरामा परेका छन् । तालिबानले ती अफगानीहरुलाई अहिले खोजिरहेको छ । तालिबानले यो अवधिमा अमेरिकी नेतृत्वका नाटो सैनिकहरुलाई सहयोग गरेका लाखौं अफगानी नागरिकहरुको डाटा हात पारेको छ । यो डाटा पछिल्लो वर्षको अवधिमा अमेरिकाले जम्मा पारेको थियो । अहिले तालिबानले यही डाटाको आधारमा ती अफगानीहरुलाई खोजी गरिरहेको छ ।
तालिबानको विशेष युनिट अल इशाले सक्रियतापूर्वक यो काम गर्न सुरु गरेको छ । अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरुको बायोमेट्रिक डाटाबेस ह्याण्ड हेल्ड स्क्यानरहरुमार्फत जम्मा गरेको थियो । यी स्क्यानरहरुमा अमेरिकालाई सहयोग गर्नेहरुको औलाको छाप र आँखाको रेटिनाको प्रतिलिपि संग्रहित छ । तालिबानले यस्ता ह्याण्ड हेल्ड स्क्यानरहरु ठूलो संख्यामा फेला पारेको छ । अहिले उसले यी स्क्यानरहरुबाट अमेरिकालाई सहयोग गर्नेहरुको ठूलो डाटाबेस तयार गरिरहेको छ ।
जेंगर न्यूजलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा तालिबानको विशेष युनिट अल इशाका ब्रिगेड कमाण्डर नवाजुद्दीन हक्कानीले यसको पुष्टि गरेका छन् । अल इशाले ती डाटाहरु एक ठाउँमा जम्मा गरिरहेको छ जसको प्रयोग कुनै समय अमेरिकाले गर्थ्यो । हक्कानीका अनुसार यो डाटाबेसबाट को–को पहिले अमेरिकी सेना र नाटोसँग काम गरिसकेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
यो त्यही डर हो जुन डरका कारण ठूलो संख्यामा अफगानीहरु देश छाडेर भाग्नको लागि काबुल विमानस्थलतिर दौडिएका थिए । यी लाखौं मानिसहरुले पछिल्लो २० वर्षमा कुनै समय अमेरिकालाई सहयोग गरेका थिए र अब उनीहरु सबैलाई ज्यानको खतरा छ । हक्कानीले पनि अन्तरवार्तामा यसैतर्फ इशारा गरेका छन् । उनले अन्तरवार्तामा भनेका छन् ‘काबुलमा नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । अब काउन्टर इन्टेलिजेन्समा केन्द्रित हुँदैछौं । अल इशाले यो काम सुरु गरिसकेको छ । अहिले डाटा स्क्यान भइरहेको छ ।’
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले सक्रिय रुपले काम गरेको समयमा उसले हाइड नामको उपकरणको लगातार उपयोग गरेको थियो । हाइडको अर्थ ह्याण्डहेल्ड इन्टरएजेन्सी आइडेन्टिटी डिटेक्सन इक्विपमेन्ट हो । यसको माध्यमबाट अमेरिकाले १५ लाख अफगानीको डाटा जम्मा गरेको थियो । यी डाटामा औंलाको छाप, अनुहारको स्क्यानदेखि आँखाको रेटिनाको स्क्यानसमेतथियो । यो डाटाबाट अमेरिकाले आफूलाई सहयोग गर्ने अफगानीहरुलाई चिन्ने गर्थ्यो ।
न्यूयोर्क पोस्टका अनुसार हक्कानीको तर्फबाट ‘अमेरिकी कठपुतली’हरुलाई चेतावनी जारी गरिएको छ । हक्कानीको तर्फबाट ‘जसले पनि अमेरिकी सेनजालाई सहयोग गरेका थिए वा अफगान सरकारसँग हात मिलाएका थिए उनीहरुलाई नछोडिने’ भनिएको छ । यो डाटा पनि त्यही समय लिक भएको छ जतिबेला ठूलो संख्यामा अमेरिकी हतियार पनि तालिबानको हात परेको छ ।
यसै गरि, तालिबानको नाम लिदै राशिद खानले गरेको यस्तो मार्मिक अपिलले दुनियाका आखा रसाएका छन्
तालिबानले नियन्त्रणमा लिएयता अफगानिस्तानकाे अवस्था झन् बिग्रिँदै गएकाे छ । हिजाे बिहीवार राति काबुल विमानस्थलबाहिर भएकाे विस्फाेटमा १३ अमेरिकी सैनिकसहित कम्तीमा ९० जनाकाे ज्यान गइसकेकाे छ ।
विस्फाेटमा घाइते हुनेकाे सङ्ख्या एक सय ५० नाघेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार इस्लामिक स्टेटले आत्मघाती आक्रमणकारीले ‘अमेरिकी सेनाका सहयोगी र अनुवादकहरू’ लाई निसाना बनाएको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राशिद खानले लेखेका छन्, ‘काबुलमा फेरि रगत बगिरहेकाे छ अफगानीलाई मार्न बन्द गर ।’
यसैबीच अफगानिस्तानका स्टार क्रिकेटर राशिद खानले सामाजिक सञ्जालमा एक मार्मिक अपिल गरेका छन् । उनले रक्तपात राेक्न माग गर्दै अफगान नागरिकलाई नमार्न अपिल गरेका छन् । बेलायतमा टी–२० खेलिरहेका राशिद खानका परिवार अहिले अफगानिस्तानमा छन् ।
अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा उद्धार कार्य सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । तालिबानसँग सहमति गरेअनुसार अमेरिकाले उद्धार कार्य यही अगस्ट ३१ तारिखसम्ममा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पनि ब्याक हुदै , अब के हुन्छ ?
तोकिएको समयसीमा ९डेडलाइन० अगस्ट ३१ नजिकिँदै गर्दा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना स्वदेश फिर्ता सुरु भएको छ। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पेन्टागनका प्रवक्ता जोन कर्बीले काबुल विमानस्थलबाट आफ्ना सेना फर्किन थालिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
एक प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, हामी हट्दै छौं।’ तर उनले अहिलेसम्म कति सैनिक फिर्ता भए भन्ने कुनै जानकारी दिएनन्। उनले निश्चित समयसीमा भित्र अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको बताए।
तर अन्तिम क्षणसम्म पनि अफगानिस्तानबाट बाहिरन चाहने अफगान नागरिकलाई निकाल्न आफूहरूका तर्फबाट सहयोग गरिने पनि बताए। पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सेनाका मेजर जनरल विलियम टेलरले शुक्रबार आफूहरूले गरेको ड्रोन हमलामा आईएसआईएस–के का दुई षड्यन्त्रकारी मारिएको र एक जना घाइते भएको बताए।
त्यस क्रममा बिहीबार भएको बम विस्फोटपछि अमेरिकी सैनिकले चलाएइको गोली लागेर केही अफगानीको मृत्यु भएको हो भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा पेन्टागनका अधिकारीले यसको पुष्टि गर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘तर हामी यसलाई पूरै नकार्न पनि सक्दैनौं।’